Qeexitaannada ugu wanaagsan ee soo saaraha gaaska dhaliyaha 50KW LPG iyo Warshad | Naipute
Awood la qiimeeyay (kW / kVA) 50 / 62.5
Lagu qiimeeyay Hada (A) 90
Guud ahaan Cabbirka (L * W * H) (mm) 2100 * 800 * 1600
Miisaanka Net (kg) 1150
Model NY52D6TL (Teknolojiyada AVL)
Lambarka silsiladda 4
Caajis * Faalig (mm) 112 * 132
Wadarta Barakaca (L) 5.2
Awood lagu qiimeeyay (kW) 60
Saliid (L) 13
Model 50KZY, NPT Nooc
Karti (%) 88.6
Mashiinka gaaska waa mashiinka marawaxadaha gaaska.
Mashiinka marawaxadaha gaaska (matoorka marawaxadaha gaaska ama mashiinka marawaxadaha gubta), ama marawaxadaha gaaska, waa nooc ka mid ah matoorrada ay leeyihiin matoorrada kuleylka. Marawaxadda gaaska waxay noqon kartaa erey si ballaaran loo isticmaalo. Mabaadi'deeda aasaasiga ahi waa isku mid, oo ay ku jiraan marawaxadaha gaaska, matoorrada jetka iyo wixii la mid ah. Guud ahaan marka la hadlayo, matoorka marawaxadaha gaaska waxaa loo isticmaalaa maraakiibta (inta badan maraakiibta dagaalka ee militariga), gawaarida (inta badan weynaan ku filan oo ay ku soo jiidan karaan marawaxadaha gaaska, sida taangiyada, gawaarida injineernimada, iwm.), Qalabka koronto dhaliyaha, iwm. Dareemida, marawaxadaha ayaa wada ma aha oo kaliya kombaresarada, laakiin sidoo kale usheeda dhexe ee gudbinta, taas oo ku xiran nidaamka gudbinta gawaarida, gawaarida ama matoorka markabka.
Mabda 'ahaan shaqeynaya ayaa ah in silsilad kasta oo ka mid ah mashiinka naaftada ah ee afarta ah ay leedahay afar garaac si ay u dhammaystirto wareegga shaqada ee nuugista isku-buufinta qiijiye ballaadhinta. Mid ka mid ah qaab-dhismeedka dhululubo ee mashiinka naaftada ayaa inta badan ka kooban silsilad, bastoolad, ul isku xirta, crankshaft, qaboojiyeyaasha iyo qiijiyeyaasha, qalabka shidaalka lagu shubo iyo qaadashada iyo tuubada qiiqa. Bistooladdu afar jeer ayey ka socotaa kor ilaa hoose silsiladda si ay u dhammaystirto meertada shaqada, hal shaqo u qabato, crankshaft-ka ayaa laba jeer rogmanaya. Si xawaaruhu u xasilloon yahay, duufaan aan firfircooneyn ayaa lagu wadaa dhamaadka crankshaft si looga takhaluso isbeddelka xawaaraha ee ay keento shaqada garaaca
Hore: qeexida sheyga ee 30KW LPG matoor gaas
Xiga: Qeexitaanka alaabada ee Generator Gaaska 100KW LPG